स्वास्थ्य Archives - Page 166 of 180 - Purbeli News
२ गिलास पानीले यसरी घटाउँछ ४ दिनमै मोटोपन
मानिसहरु आफ्नो खानपानमा ध्यान दिदैनन् । जसका कारण अहिले आम मानिसहरु मोटोपनका समस्याले हैरान बनेका छन् । धेरैले मोटोपनको समस्या हटाउन अनेकौं उपाए अपनाइरहेका छन् । आज हामी तपाईहरुलाई यस्तो एक पेय पदार्थको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौ जसले मोटोपन हटाउँन सहयोग गर्छ । ८ गिलास पानि, १ चम्चा अदुवाको धुलो, एउटा काँक्रोका टुक्रा, एउटा कागतीको काटेको टुक्र...
तितो करेलाले कस्ता रोगहरु निको पार्छ
खादा कति पयलाई करेलाको तितो स्वाद मन पर्दैन त कति पयलाई अत्याधिक मन पर्छ । स्वादका हिसावले मन पर्नु अथवा नपर्नु भन्दा स्वास्थ्यका हिसावले कस्ता खाले मानिसले करेलाको सेवन गर्नु हुन्छ भनेर सामान्य जानकारी राख्नु अत्यावस्यक छ । करेला एन्टिअक्सिडेन्ट र भिटामिनले भरिपूर्ण हुन्छ । करेलामा भिटामिन ए, भिटामिन बि, भिटामिन सि, फाइबर, क्याल्सियम, पोटासियम, जि...
गर्मीमा खुट्टाबाट गन्ध आउँछ ? त्यसो भए यसो गर्नुहोस
गर्मी सुरु भएसंगै पसिनाबाट उत्पन्न हुने समस्या बढ्छ । यसको लागी कतिपयले विभिन्न बडी स्प्रे तथा पर्फ्युको प्रयोग गर्दछन् भने कतिले नियमित नुहाउनु, पानी पिउने अनि सन्तुलिन भोजनमा ध्यान दिने गर्दछन् । गर्मीमा देखा पर्ने अर्को एउटा समस्या हो जुत्ताबाट आउने गन्ध । अफिस होस् या घर जुत्ताबाट खुट्टा निकाल्दा वित्तिकै नराम्रो गन्ध आउँन थाल्छ । कतिपय अवस्थाम...
एचआईभी/एड्स बारे नयाँ तथ्य फेला, संक्रमण हटाउन बैज्ञानिकहरू सफल
एजेन्सी- एचआईभी एड्सकोको उपचार सम्भव भएको अमेरिकी वैज्ञानिकहरुले दाबी गरेका छन् । अमेरिकी वैज्ञानिकहरुको एक टोलीले हालसालै मुसामा गरिएको एक सफल परीक्षणपछि संक्रमित मानिसमा पनि एचआईभीको उपचार सम्भव भएको उनीहरुले दावी गरेका हुन् । अमेरिकी वैज्ञानिकहरुको टोलीले क्रिस्पर जीन-सम्पादन प्रविधिमार्फत विना संक्रमण मानिसको कोषिकाबाट एचआईभीको सं...
दाँत किराले खाएर दुखेको छ ? छुट्कारा पाउँन यसो गर्नुस्
दाँत स्वास्थ्य र सौन्दर्य दुबैको लागि अति महत्वपूर्ण अंग हो । यसलाई स्वस्थ, सफा र सुन्दर राख्ने सबैको चाहाना हुन्छ । नचाहाँदा नचाहाँदै पनि विविध कारणले दाँतमा समस्या आउँछ । अधिकांशमा दाँतमा आउने समस्या मध्ये एक हो किरा लाग्ने र दुख्ने । दाँतमा किरा लाग्ने र दुख्ने किन हुन्छ ? यस्तो समस्याबाट छुटकारा पाउन के गर्ने ? दन्त रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजिब सि...
आफ्नो स्वास्थ्य स्थितबारे सबैलाई चासो हुन्छ । आफुलाई कुनै रोग पो लागेको छ कि ? वा रोग लाग्ने संभावना छ कि ? यस्ता प्रश्न बारम्बार उठिरहेका हुन्छन् र मनमा अज्ञात भयले डेरा जमाइरहेको हुन्छ । अब यस्तो शंका-उपसंका छाड्नुहोस् । किनभने, अब तपाईले आफ्नो स्वास्थ्य-जाँच आफै गर्न सक्नुहुनेछ । त्यो पनि एक मिनेटमै । कसरी ? त्यस भए आउनुहोस्, यी काइदा अपनाएर पलभ...
सेवा र गुणस्तरका आधारमा अस्पतालहरू वर्गीकरण गरिने
काठमाडौँ / सरकारले अस्पताललाई श्ययाका आधारमा नभई सेवाका आधारमा वर्गीकरण गर्ने भएको छ । नेपाल स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड २०७४ मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले पारित गरेपछि पहिलोपटक अस्पताललाई सेवा र गुणस्तरका आधारमा वर्गीकरण गरिन लागिएको हो । यसअघि राज्यको संरचना र श्यया सङ्ख्याका आधारमा मात्रै गरिएकामा अबदेखि सेवाका आधारमा वर्गीकरण गरिने व्...
यी हुन् पुट्ट पेट घटाउने १० घरेलु उपाय
१. यदि तपार्इंलाई पेटको कुनै रोग छैन भने बिहान उठ्नेबित्तिकै मनतातो पानीमा कागतीको रस राखेर पिउँदा पेटको बोसो घट्छ । यसले मेटाबोलिजम दुरुस्त रहन्छ र तौल कम गर्न पनि मद्दत मिल्छ । २. बिहान काँचो लसुन खाने बानी गर्नुहोस् । यसले शरीरलाई निकै फाइदा गर्छ । बिहान लसुनको दुई या तीन पोटी चपाएपछि तातोपानीमा कागती हालेर पिउनाले बोसो घटाउन मद्दत गर्छ । यसबाट...
पुरुषभन्दा बढी महिला एचआइभी सङ्क्रमित बढी, नौजनाको मृत्यु
बझाङ । जिल्लामा पुरुषभन्दा बढी महिला एचआइभी सङ्क्रमित भएको बझाङ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा पुरुषभन्दा बढी महिलामा एचआइभीे सङ्क्रमण देखिएको हो । एकसयपन्ध्र एचआइभी सङ्क्रमितमध्ये जिल्लामा ५७ पुरुष र ५८ महिला रहेको एचआइभी काउन्सेलर अरुणा खड्काले बताउनुभएको छ । तीमध्ये नौ एचआइभी सङ्क्रमितको मृत्यु भइसकेको छ ।...
काठमाडौँँ । राजधानी बाहिर पनि विशेषज्ञ उपचार सेवा विस्तार गर्ने सिलसिलामा अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनकपुर अञ्चल अस्पतालबाट मुटु रोगको उपचार सुरु गर्ने भएको छ । मन्त्रालयको रोहबरमा मङ्गलबार सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र र जनकपुर अञ्चल अस्पतालबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सहमतिपत्रमा अस्पताललाई प्रविधि र विशेषज्ञसहितको ज्ञानसीप गङ्ग...